Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo ku taliyay in Ciidamada Kenya dalka laga saaro – Kalfadhi
Wasiirka Wasaaradda Boostada iyo Isgarsiinta Soomaaliya Eng Cabdi Canshuur Xasan ayaa maanta Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor aqriyay dhibaatadii ka dhalatay duqaymaha Ciidamada Kenya ay u geestaan xarumaha Shirkadah Isgaarsiinta Soomaaliya ee Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo.
Wasiirka ayaa sheegay in Hormuud laga bur-buriyay dhowr Xarumood oo muhiim u ahaa degaanka waxaana sidoo kale duqayntaasi iyo toogasho toos ah looga dilay dad badan oo katirsanaa Shaqaalaheeda sabab la’aan. Wasiirka ayaa sidoo kale baarlamaanka ka hor sheegay in maaliyiin doolar ay ku bur burtay duqaymaha Kenya ee xarumaha Hormuud.
“Baaritaankii aan sameynay waxaan ku ogaanay in lagu bur buriyay Xarumo badan oo ay leeyihiin Shirkado Soomaaliyeed oo Isgaarsiin, dad badan looga dilay maaliyiin doolarna ay ku bur-burtay” ayuu yiri Wasiir Eng Cabdi Canshuur Xasan oo ka hor hadlay Golaha Shacabka.
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay madasha baarlamaanka ayaa ku taliyay in Ciidamada Kenya dalka laga saaro si deg deg ah halka qaar kalane ay ku baaqeen in dacwad laga gudbiyo oo laga qaado magdhow ku aadan hantidii iyo naftii ay sababsatay.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay in ay qaado tilaabo sharci ah oo arintaan deg deg wax looga qabanayo.
“Aniga waxaan ku talinayaa in si deg deg ah dalka looga saaro Ciidamada Kenya ee laynaya dadkeyna bur burintana kuwada ganacsiga Soomaaliya” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
“ Kenya waxay rabtaa in Hormuud iyo Somtel la bur buriyo si Safaricom uga shaqayso Jubbooyinka, waa gumeysi” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa hab dhaqanka Ciidamada Kenya ee Jubbooyinka ku tilmaamay Duulaan qaawan oo dalka lagu soo qaaday islamarkaana aan loo dulqaadan karin qorshaha Ciidamada Kenya.
“Aniga waxaa ii muuqata in Kenya Duulaan ku soo qaaday dalka waxa socdana aan indhaha laga dadan karin” ayuu yirir Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi. “Waa in tilaabooyin sharci ah qaadnaa si aan u badbaadino dalka iyo dadka” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo katirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi ayaa sheegay in Kenya aysan dalka Sharci ku joogin wax kastana laga filan karo isagoo ku taliyay in qaraar cad ay ka soo saaraan baarlamaanka Soomaaliya kadibna ay ku daba-galaan fulinta qaraarkaasi Xukuumadda Soomaaliya.
“Ciidamo aan dalka ku joogin sifo sharci ah waxaa ka suurtowdaa tilaabo kasta waa in baarlamaanka soo saaraan qaraar dalka looga saaro Milateriga Kenya” ayuu yiri Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya.